Qabsoomidda shirka Maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud oo meel wanaagsan maraya – Radio Muqdisho
Qabsoomidda shirka Maamul u sameynta Mudug iyo Galgaduud oo meel wanaagsan maraya
Madaxweynaha Maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed ayaa sheegay in Maamulkiisu uu dadaal ugu jiro sidii nabadgelyo uu ugu qabsoomi lahaa shirka maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud kaas oo qorshuhu yahay in dhawaan la qabto.
Cabdullaahi Cali Maxamed iyo wafdi uu hogaamiyay oo socdaal shaqo kaga soo laabtay Muqdisho ayaa sheegay intii uu Muqdisho ku sugnaa ay kulamo la qaateen Madaxda dowladda, isla markaana ay isla garteen in shirka la qabto xilligii loogu talagalay, laguna qabto goobtii horey loo iclaamiyay.
“Madaxda dowladda dhexe iyo beesha caalamku waxa ay garab taaganyihiin in dhismaha maamulka Galmudug iyo Galgaduud, anaguna aan ka shaqeyneyno qabsoomida shirka” ayuu yiri Cabdullaahi Cali Baarleex.
Madaxweynaha Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa sheegay in sugidda amniga ay qeyb ka noqon doonaan Ciidamada Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Xaaladda Deegaanka Deefow oo degan iyo baaqyo loo jeediyay maleeshiyaadka dagaallamay